बक्स अफिस लाग्यो, व्यापारिक रिपोर्ट लुक्यो « Ramailo छ
बक्स अफिस लाग्यो, व्यापारिक रिपोर्ट लुक्यो
साउन १ गतेदेखि राजधानीमा बक्स अफिस प्रणाली जडान भएको छ । बक्स अफिस लागेपछि निर्माता र वितरकले आफ्नो फिल्मले दैनिक गर्ने व्यापारिक हिसाब बुझ्दै आएका छन् ।
बक्स अफिसबाट हिसाब बुझ्ने निर्माता र वितरक व्यापारिक हिसाब भने गुपचुप राख्दै सार्वजनिक गर्न डराइरहेका छन् । नपत्याए बक्स अफिस लागेदेखि प्रदर्शनमा आएका फिल्महरुलाई हेरे पुग्छ । साउन १ देखि हालसम्म करिब एक दर्जन फिल्महरु हलमा आएका छन् । एक शो हाउसफूल हुने बित्तिकै हो हल्ला गरेका यी मध्ये अधिकांश फिल्मले बक्स अफिस रिपोर्ट भने सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन् ।
बक्स अफिस प्रणाली लागु भएका फिल्महरु ‘पण्डित बाजेको लौरी’, ‘भैरे’, ‘चक्कर’, ‘चि मुसी ची’,’ रोमियो एन्ड मुना’, ‘कायरा’, ‘झमकबहादुर’, ‘कहीं कतै’, ‘सुकुलगुन्डा’, ‘टिनेज’, ‘पिरिम पर्या छन’ फिल्मले कतिको कलेक्सन गरे ? कुनै हिसाब किताब छैन । निर्देशक एभ्रेष्ट सूर्य बोहोराले भैरे सफल भएको भन्दै यसको सिक्वले निर्माण गर्ने घोषणा गरे । तर कलेक्सन सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेनन् । मल्टिप्लेक्सबाट दुई दिनमै उत्रिएको भैरे कसरी सफल भयो ? भन्ने बारे फिल्म वृक्तमा अझै पनि बहस भैरहेको छ ।
यस्तै आर्यन सिग्देलको फिल्म ‘कायरा’ ले दुई दिनमै करोड माथिको कलेक्सन गरेको रिपोर्ट एकाध अनलाइनले सार्वजनिक गरे । तर स्वयम आर्यनले भने आफ्नो फिल्मले गरेको कलेक्सन मिडियालाई बताउन चाहेनन् । ‘रोमियो एन्ड मुना’ का निर्माता प्रशन्न गोपालीले पनि व्यापारिक हिसाब नखोल्ने बताए । फिल्म बक्स अफिसमा सफल भएन ।
हलमा लागेर उत्रिएको पत्तो नभएका ‘पण्डित बाजेको लौरी’, ‘चक्कर’, ‘चि मुसी ची’, ‘झमकबहादुर’, ‘कहीं कतै’, ‘सुकुलगुन्डा’, ‘टिनेज’, ‘पिरिम पर्या छन्’ जस्ता फिल्महरुको हिसाब कहाँ खोज्ने ? यी सबै फिल्म सुपरफ्लप भए ।